A na-ekpughe ọnụahịa Oppo K3 na nkọwapụta zuru ezu Gam akporosis
A na-atụ anya na Oppo ga-ebido ụdị etiti a na-akpọ Oppo K3 na ngwụcha ọnwa a. Ihe nlere anya apụtawo oge ole na ole na ntaneti, na-enye anyị ụdị nkọwa dị mkpa ọ ga-eweta.
Na ohere ọhụụ a, a hụla ngwaọrụ ahụ n'ọbá akwụkwọ ngwaahịa nke weebụsaịtị China Telecom; N'ebe ahụ, e gosipụtara njirimara na njirimara nkọwa zuru ezu nke teknụzụ sitere na ya, anyị ga-ekwukwa banyere ha n'okpuru.
Site na ndepụta a achọpụtala na Oppo K3 na-abịa na akara ngosi 'PCGM00' ma nwee ihuenyo 6.5-inch nwere mkpebi Full HD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ, yana nke ahụ kwadebere ya na chipset Qualcomm Snapdragon 710, a chipset iji na elu ufọt ufọt nso nke gam akporo bụ 10nm na-eru a kacha elekere ọsọ nke 2.2 GHz.
Oppo K3 leaked
Ngwaọrụ gụnyekwara a Igwefoto igwefoto abuo n’azu, nke gunyere ihe mmetụta abụọ: isi 16 MP na abụọ MP nke abụọ iji nweta ọnọdụ eserese nke foto. Banyere selfies, enwere ihe mmetụta 2-megapixel selfie sensor nke nwere ike ịnọdụ ala na ọkwa, ọ bụ ezie na a na-anụ asịrị na ngwaọrụ ahụ ga-enwe usoro mmapụta ebe a ga-etinye ya.
Ọnụahịa nke K3 na-egosi bụ 2,199 yuan (~ 287 euro). Na-akpali mmasị, na ngwaọrụ-abịa na 8GB nke Ram na 128GB nke esịtidem ohere nchekwa. Ya mere, anyị na-ahụ ego incredibly ala maka ndị dị otú ahụ nkọwa. O yikarịrị ka ọ ga-abụrịrị ụdị ọdịiche dị na 6GB RAM nwere akara ọnụahịa dị ọnụ ala karịa.
Oppo K3 Leaked ụdịdị na atụmatụ
N'ikpeazụ, Oppo K3 nwere agba atọ dị iche iche: Nebula purple, black, and white. O nwekwara ọdụ ụgbọ USB-C, na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa 20W ma nwee jaakụ ọdịyo 3,5mm. Otú ọ dị, Ọ ka ga-amata mgbe a ga-eme ka mkpanaka ahụ rụọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-ekpughe ọnụahịa Oppo K3 na nkọwapụta n'ụzọ zuru ezu